Mamofona rà sy tahotra ao amin'ny labozia ratsy 7 4D vaovao - iHorror
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Maimbo ra sy tahotra ao amin'ny labozia ratsy 7 4D vaovao
Maimbo ra sy tahotra ao amin'ny labozia ratsy 7 4D vaovao
by Admin Janoary 5, 2017
by Admin Janoary 5, 2017 1,035 hevitra
Mpanoratra Shannon McGrew
Ny ankamaroan'ny mpankafy mampihoron-koditra dia lasa nahazatra ny "Resident Evil" franchise, ahoana no tsy hisy?
Ity tontolo ity dia foto-tsakafon'ny karazana horohoro hatramin'ny nivoahan'ny lalao video tamin'ny 1996 sy ny sarimihetsika tamin'ny 2002. Miandry ny lalao vaovaon'izy ireo,“Ratsy mponina 7: Biohazard”, izay mitondra ny mpijery amin'ny sehatry ny fialamboly 4D amin'ny 24 Janoary, orinasa iray te-hanadoboka bebe kokoa ny fahatsapanao.
Geek merchandiser Merchoid dia hamoaka a "Ratsy mponina 7: Rà, hatsembohana ary tahotra ny labozia 4D VR" amin'ny fankalazana ny fizarana farany.
Raha saika ao anaty ianao Resident evil tsy ampy, ny mpamorona ny voter-drà mandrafitra azy ireo amin'ny fomba toy izany mba hampidirana ny fahatsapana fofona, hanome anao traikefa mivoatra, mihoatra ny solomaso.
Tsy azoko antoka raha zavatra tsara izany, saingy tsy maintsy ekeko fa liana aho. Nambaran'ireo mpamolavola fa ny fofona dia hampahatsiahy ny “hazo tranainy, hoditra ary mety ho ra…” izay dingana ambonin'ilay fofon'ireo faty lo.
Raha ny hanitra maharitra? Ireo labozia dia natao haharitra 18-20 ora eo ho eo ary manana vidiny $ 18.99 izay tsy dia be loatra rehefa mahazo labozia manara-penitra - na dia manodidina ny fahafatesana sy ny famotehana ary ny tsy maty aza izany.
Toa mbola tsy amidy eo amin'ny tranokala ireo labozia, saingy mahatsapa aho raha vantany vao ampiana, dia hivarotra izy ireo, ka alao antoka fa hamerina hatrany amin'ny Merchoid ianao.
Ity dia zavatra tsy maintsy ananana, indrindra raha tianao ny mampifangaro azy amin'ny traikefanao rehefa milalao “Ratsy mponina 7: Biohazard”.
Ho ahy dia faly fotsiny aho mahita labozia izay namboarina taorian'ny horonantsary sy mpilalao horonantsary ankafizinay indrindra ary manantena ny hanohy ny fanangonana labozia feno horohoro ho ahy manokana aho. Fanombohana resaka mahafinaritra foana io.
vaovao farany: Lany amin'ny Merchoid ireo labozia, nefa mbola misy ihany amin'ny alàlan'i Numskull.